ရုပျလှရုံတငျမကဘဲ စိတျထားလေးပါလှတဲ့ ခဈြသူဘဘေီမောငျကိုပိုငျဆိုငျထားရတာ သူအရမျးကံကောငျးလို့ပါဆိုတဲ့ အဆိုတျောသားဂနျး – Cele Top Stars
ရုပျလှရုံတငျမကဘဲ စိတျထားလေးပါလှတဲ့ ခဈြသူ ဘဘေီမောငျကို ပိုငျဆိုငျထားရတာ သူအရမျးကံကောငျးလို့ပါဆိုတဲ့ အဆိုတျောသားဂနျးရဲ့အကွောငျးလေးကို cele top stars ပရိတျသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝေ လိုကျပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ အိမျမကျဆုံရာ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ ကနေ စတငျကာ အားပေး မှုတှကေို ရရှိခဲ့သူ အဆိုတျော သားဂနျးကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။
သားဂနျးကတော့ အဆိုကောငျးသူ တဈယောကျဖွဈသလိုပဲ ယောကျြားပီသပွီး ခနျ့ညားတဲ့ ရုပျရညျကွောငျ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိထားသူဆိုရငျလညျး မှားမယျ မထငျပါဘူးနျော.။
သားဂနျးကတော့ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ သညျးသညျး လှုပျအားပေးမှုတှကေို ရရှိထားပမေယျ့ ခဈြသူ ဖွဈသူ ဘဘေီမောငျကိုသာ ရှေးခယျြကာ ခဈြသူစုံတှဲအဖွဈနဲ့ တရားဝငျ ခပြွကာ တှဲနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ.။ ဘဘေီမောငျရဲ့ သှကျလကျခကျြခြာမှုတှနေဲ့ အတူ စိတျထားကောငျးပုံလေးတှကွေောငျ့ သားဂနျးတဈယောကျ အခဈြမှာ ပြျောဝငျခဲ့ရပုံပါနျော.။
နိုဝငျဘာလ (၁၄)ရကျနမှေ့ာတော့ သားဂနျးက ခဈြသူ ဘဘေီမောငျကို လကျတှဲခှငျ့ ရခဲ့လို့ ပြျောရှငျနကွေောငျးကို “ရငျ့ကကျြလာပွီး လကျတှဲဖျောရှာတဲ့အခါ ရုပျရညျကအရေးမကွီးဘူးဆိုတာ သိလာလိမျ့မယျ။
အရေးကွီးဆုံးကသူ့သဘောထား တာဝနျယူမှု့ သစ်စာစောငျ့သိမှု့တို့ပါပဲ။ မှတျခကျြ ရုပျလှ စိတျလှတဲ့ မကိုခဈြရတာ ကြှနျတျောကံကောငျးတယျ”ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပေးမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။
သားဂနျးကတော့ ခဈြသူ ဘဘေီမောငျကို လကျတှဲခှငျ့ ရရှိလို့ ပြျောရှငျကွညျနူးခံစားရတာတှကေို ရငျဖှငျ့ကာ တငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော. ပရိသတျကွီး.။ ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ.။
အစမှ အဆုံးဖတျ ပေးသော Cele top stars ပရိတျသတျကွီးအား ကြေးဇူးတငျပါတယျ ။အနုပညာရှငျတှရေဲ့ သတငျးတှကေို အစဉျအပကျြ တငျဆကျပေးနသေော cele top stars page လေးကို like and share လေးပွုလုပျပေးကပြါအုံးနျော
ရုပ်လှရုံတင်မကဘဲ စိတ်ထားလေးပါလှတဲ့ ချစ်သူ ဘေဘီမောင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ သူအရမ်းကံကောင်းလို့ပါဆိုတဲ့ အဆိုတော်သားဂန်းရဲ့အကြောင်းလေးကို cele top stars ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ အိမ်မက်ဆုံရာ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကနေ စတင်ကာ အားပေးမှုတွေကို ရရှိခဲ့သူ အဆိုတော် သားဂန်းကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။
သားဂန်းကတော့ အဆိုကောင်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သလိုပဲ ယောက်ျားပီသပြီး ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူဆိုရင်လည်း မှားမယ် မထင်ပါဘူးနော်.။
သားဂန်းကတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ သည်းသည်း လှုပ်အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားပေမယ့် ချစ်သူ ဖြစ်သူ ဘေဘီမောင်ကိုသာ ရွေးချယ်ကာ ချစ်သူစုံတွဲအဖြစ်နဲ့ တရားဝင် ချပြကာ တွဲနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ဘေဘီမောင်ရဲ့ သွက်လက်ချက်ချာမှုတွေနဲ့ အတူ စိတ်ထားကောင်းပုံလေးတွေကြောင့် သားဂန်းတစ်ယောက် အချစ်မှာ ပျော်ဝင်ခဲ့ရပုံပါနော်.။
နိုဝင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့မှာတော့ သားဂန်းက ချစ်သူ ဘေဘီမောင်ကို လက်တွဲခွင့် ရခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်နေကြောင်းကို “ရင့်ကျက်လာပြီး လက်တွဲဖော်ရှာတဲ့အခါ ရုပ်ရည်ကအရေးမကြီးဘူးဆိုတာ သိလာလိမ့်မယ်။
အရေးကြီးဆုံးကသူ့သဘောထား တာဝန်ယူမှု့ သစ္စာစောင့်သိမှု့တို့ပါပဲ။ မှတ်ချက် ရုပ်လှ စိတ်လှတဲ့ မကိုချစ်ရတာ ကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေးမှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
သားဂန်းကတော့ ချစ်သူ ဘေဘီမောင်ကို လက်တွဲခွင့် ရရှိလို့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခံစားရတာတွေကို ရင်ဖွင့်ကာ တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်. ပရိသတ်ကြီး.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
အစမှ အဆုံးဖတ် ပေးသော Cele top stars ပရိတ်သတ်ကြီးအား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။အနုပညာရှင်တွေရဲ့ သတင်းတွေကို အစဉ်အပျက် တင်ဆက်ပေးနေသော cele top stars page လေးကို like and share လေးပြုလုပ်ပေးကျပါအုံးနော်